Posted by Taungoo at 1:47 PM
I really appreciate your post, bro. I've still gotalittle knowledge in Buddhism though I'maBuddhist (in fact,atraditional Buddhist).
I've heard that Tipitaka (Three baskets) covers the ways of Buddha (even say it's the common core of Buddhism). Your post is very prompt & descriptive for me. I'll be waiting for your coming related posts.
Then, can you share others where we can get more details in such prompt descriptive pattern?
ကောင်းတယ်ဗျာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဆိုပြီး ပိဋ္ဋကတ်သုံးပုံ ကိုဘာမှန်းမသိသူတွေ အများကြီးရှိတယ်ဗျ သူတို့တွေအတွက် ဒီပိုစ့်လေး က အများကြီး အကျိုးရှိမှာပါ
ဆက်လက် တင်ပြ နိုင်ပါစေ...။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေး ရှင်းပြရေးသားထားတာ ကောင်းတယ်ဗျာ။ အခုလိုမျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါပဲ။
ဒီပို့စ်ကို bookmark သွားတယ်။ :)
တောင်ငူသားရေ ဒီလိုပို့စ်လေးတွေ ကောင်းတယ်ဗျာ။ လက်ဆက်ဝေမျှပါဦး
၀ိနည်းမှာ ၂၂၇ ခုက အကျဉ်းဗျ။ အကျယ်အားဖြင့် အသေးစိတ်ရင် ကုဋေ ကိုးထောင်ကျော်ရှိတယ်လို့ မှတ်သားရဖူးပါတယ်။ ဥပဒေမှာ အခန်းခွဲသလို ထပ်ပြီး စိပ်လိုက်တာပေါ့။
ပိဋကစာမေးပွဲမှာ အာဂုမ်က အရင် အကျယ်ရေးဖြေက နောက်မှ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဂကိုယ်တော်တွေသာလျှင် အာဂုမ်ရော ရေးဖြေပါ တစ်နှစ်တည်းမှာ ၀င်နိုင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ အာဂုမ်တစ်နှစ် ရေးဖြေတစ်နှစ် ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
ရောင်းရင်းရေ...အဘိဓမ္မာ ပိဋကတ်နဲ့ ပက်သက်လို့...အလျဉ်းသင့်ရင် ဖော်ပြပေးပါအုံး..
ခုခေတ် ကျနော်တို့ လူငယ်ထုက ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အခြေခံ အချက်တွေနဲ့ တော်တော်လေး ဝေးလာကြတယ်..
ဗဟုသုတ နည်းသူ အချို့က စဉ်းစားတတ်တဲ့ အရွယ်တွေရောက်မှ အခြားဘာသာတွေကို ပြောင်းသွားကြတာ
၀မ်းနည်းဖွယ် တွေ့မြင်နေရလို့..တောင်းဆို လိုက်တာပါ...ရောင်းရင်းရဲ့ စာတွေက သာသနာ အတွက် တစ်တပ် တစ်အားပေါ့ဗျာ..